माउन्टेन ड्रिमीगं | Hamro Patro
रात्रिको ०९ : ५९
जीवनमा हामी कतिजना सपना देख्न डरायौँ, देख्नेले हबिगतमा ढाल्न डरायौँ । सपना देख्न डराउनु हुन्न रहेछ
ए साइँइइइलुउउउउ..........घाँसको भारी पुगेन भने यतातिर आऊ होइइइइइइइ ।।।
आँखै अगाडिको पारीको डाँडालाई हेरेर यसरी कहिल्यै चिच्याउनुभएको छ ? वा
आइ एम **** अमेजिङ
भनेर ठूलो स्वरले सबैको कानमा पर्ने गरी र आफ्नै जीउमा काँडा उम्रिने गरी चिच्याउनुभएको छ ?
यही भनेर चिच्याए माउण्टेन ड्रिमिङका स्वदेशी विदेशी सहभागीहरु एक हप्ते कार्यशालाको अन्तिम दिन । वैशाख २८, शुुक्रबारको दिन दक्षिणकाली भिलेज रिसोर्टमा भेला भएका नेदरल्याण्डस्देखि कपिलवस्तुका सहभागीहरु जेठ ३ गते छुट्टिने बेलामा परिवार बनिसकेका थिए । संसारका भिन्न भिन्न कुनाबाट आएका सहभागीहरु एक हप्ताको बसाइँमा मनैबाट बाँधिए, प्रेमको साँघुरो परिभाषालाई चुनौति दिँदै मुटुभरीको माया साटासाट गरे । नचिनेसम्म को हो को हो, चिनेपछि मायामोह...भन्ने चर्चित नेपाली गीतको हिस्सा सम्झाइदिने गरी माया बस्यो नेदरल्याण्डस्, बेल्जियम, इटाली, थाइल्याण्ड, भारत, पाकिस्तानदेखि काठमाडौँ, बुटवल, रुपन्देही, धादिङसम्मका सहभागीहरुबीच ।
दिगो सामुदायिक विकासका निम्ति एकता, बुटवलबाट आएका सहभागीहरु सामाजिक विषयवस्तुहरुलाई कसरी जिवन्त पारेर प्रस्तुत गर्ने र स्वयंलाई कसरी बुझ्ने भनेर सिक्न आएको बताउँथे । थाइल्याण्डको बैंककबाट उपस्थित ४९ वर्षीय सोर्नचाइ ड्रागन ड्रिमिङको बारेमा बुझ्न उत्साहित भएरै नेपाल आएको बताए ।
बेल्जियमबाट पहिलो चोटि नेपाल आइपुगेकी यित्से ह्युसमान्स्ले आपूmलाई स्वतन्त्र रुपमा बहकिन दिन र कुनै पूर्वाग्रह नराखी आपूm र अरुलाई बुझ्न उद्देश्य राखेको बताइन् । तिमीमा म र ममा तिमी भन्ने शब्दले तानेर नै आपूm यहाँसम्म आइपुगेको उत्तर प्रदेश, भारतकी अशिमा विष्नोइले बताइन् । बालुवाटारबाट कार्यशालामा आइपुगेकी पूजा अधिकारीलाई कार्यक्रम आध्यात्मिक लागेकाले आएको बताइन् भने २३ वर्षीय विजय थापा समाज परिवर्तनको लागि एउटा इट्टा थप्ने सोचका साथ आइपुगेका थिए । संसारभरका विभिन्न क्षेत्रबाट भिन्न उद्देश्यले भेला भएका सहभागीहरु आखिर माउण्टेन ड्रिमिङकै लागि भेला भएका थिए । के हो त माउण्टेन ड्रिमिङ ?
सामाजिक मञ्चका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइ.सि.एस.टि) का संस्थापक गोपाल अर्याल दाइलाई कार्यशाला सकिसक्दा पनि माउण्टेन ड्रिमिङ भनेको के हो भनेर सोध्दा आपूm त्यसलाई वाक्यमा ढालेर व्याख्या गर्न असमर्थ रहेको बताउनुहुन्छ । “यो अनुभव हो, मायाको सञ्चार हो, यसलाई शाब्दिक अर्थमा ढालेर वर्णन गर्ने शब्द मसँग छैन” भन्नुहुन्छ गोपाल दाइ ।
शुक्रबार बेलुका नै कार्यक्रम कस्तो हुने हो भनेर छनक देखियो । गोपाल दाइले सबैलाई गोलो घेरामा हात समातेर उभिन लगाउनुभयो । कहिल्यै नदेखेका वा नचिनेका अनुहारलाई झ्वाम्म अँगालो हाल्न इन्स्ट्रकसन आयो । चिनेका नचिनेका, स्वदेशी, विदेशी, महिला, पुरुष, अधवैँशे, बालक सबै सहभागीहरु एक अर्काको अँगालोमा बाँधियौँ । मानिसहरु कसैको छुवाइबाट तर्सिने र तर्किने भएका छन् । संसारभरका मानिस एकै हौँ भने माया र विश्वास खोइ त भनी सोध्नुहुन्छ गोपाल दाइ । अर्को दिन कार्यक्रम हलमा आउँदा आफ्नो सामाजिक हैसियत बिर्सेर शरीरमा मात्र भएर उपस्थित हुन अचम्मको इन्स्ट्रकसन फेरि गोपाल दाइबाटै आयो ।
अपरिचित अनुहार एकछिनमै परिचित बन्दै गए । सहभागीहरु आउने क्रम राति अबेरसम्म चलिरहेको थियो । सामाजिक हैसियत नै बिर्सेर आउनु भनेर अह्राइएको छ । यत्तिका वर्ष शरीर मात्र भएर बाँचेका होइनौँ रहेछ भन्ने हेक्का त बल्ल पो भयो त । मानिस सबै उही हुन्छन्, संसारभरमा जुनसुकै ठाउँमा जन्मिएको भएपनि हाम्रो भौतिक शरीर र मानिस भएर अनुभव गर्ने संवेदना एउटै त हो । शरीर छ र त यो आनन्द छ, हावा छ, जमिन छ, सपना छ, परिवार छ, साथीभाइ छन् । तर यही शरीरलाई बेवास्ता गर्दै हामी सांसारिक कर्मको जालोमा कसरी जेलिँदा रहेछौँ । “आपूm को हुँ” र “मेरो अस्तित्व के का लागि” भन्ने चेतना पनि नपाई कति संसारबाटै अलप भइदिन्छौँ ।
शनिबारको दिन सहभागी सबैजनाले एकअर्कासँग दिनभरी माया साट्यौँ । हाम्रो लागि सायद समय अड्किएको थियो । हामी शरीर भएर उपस्थित भएका थियौँ । हाँस्दा, हिँड्दा, अरुको आँखामा हेर्दा, मुस्कुराउँदा, स्वास लिँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ, एक एक गरी अनुभव लिइरहेका थियौँ । हो, हामी वर्तमानमा बाँचिरहेका थियौँ । विगतमा छिर्दा पनि म को हुँ, म के हुँ र म कसरी यस्तो भएँ भनेर आफ्नोबारेमा ज्ञान लिनका लागि प्रवेश ग¥यौँ । यसो गर्दा आपूmमाथि कुनै पूर्वाग्रह नराखी ग¥यौँ । जीवनमा तीतामिठा, राम्रानराम्रा जे पनि अनुभव भए ती सबैले नै मलाई म बनायो भनेर आपूmलाई स्वीकार्न सिक्यौँ । ती हर एक पल प्रति कृतज्ञ पनि भयौँ । यति मात्र होइन, कोही भक्कानिएर त कोही सुँक्सुकाउँदै, कहिले हाँस्दै अनि कहिले भावुक हुँदै अरुमाथि पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखी अरुको कुरा सुन्यौँ र ढाडस दियौँ । फलानो त यस्तो रहेछ, फलानी उस्ती भनेर पूर्वाग्रह राख्ने बानी त हामीमा परिसकेको हुन्छ । फलानो यस्तो र उस्तो भन्नुअघि हामीलाई उसले भोगेको जीवनको हेक्का नहुँदो रहेछ नि त । यो दिनमा आपूmलाई स्वीकार्न र समाजले बनाइदिएको सामाजिक प्राणी नभएर प्राकृतिक प्राणी भएर बितायौँ ।
इटालीबाट आएका उरी नोय मिरले पनि आइतबारदेखि बुधबारसम्म यिनै कुराहरु सिकाए । सहभागी सबैलाई आपूmभित्रको म र अरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सिकाउने प्रयास गरे । सामाजिक परिवर्तन हर एक व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ । पहिला हामी आपूmले आपूmलाई बुझौँ । शरीरले व्यक्त गर्न खोजेको भावलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ । आपूmलाई बुझ्न सक्ने मानिसले अर्को शरीरलाई पनि आदर गर्न सिक्छ भन्ने हेतुले उरीले सुरुका दुई दिन आफ्नो शरीरको भाव बुझ्न सिकाए । हरेक पलमा मनमस्तिष्कबाट आउने आज्ञालाई चनाखो भएर चिन्न सिकाए ।
आवाज र शब्दको प्रयोग बिना नै हामी कति कुरा भन्न सक्ने रहेछौँ, यो उरीले गतिविधिहरु गराउँदै जाँदा थाहा भयो । हामीभित्र गुम्सिएर रहेका भावलाई शरीरले बुझाउन पर्ने भयो । साथीहरुले मभित्रको भावलाई बुझ्ने कोशिस गर्ने भए । साथीले बुझेको कुरा सुनाउँदा प्रस्तुतकर्ताले भन्न खोजेकै भाव भन्न नसकिने अवस्था पनि हुने रहेछ । मैले देखेको भाव खासमा मेरा आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट आउने भए र मेरो बुझाई मेरो अनुभवले सृजना गर्दो रहेछ भन्ने मीठो पाठ यही एक हप्ते कार्यशालामा सहभागी सबैले सिक्यौँ । अनि त सिक्यौँ अरुलाई आदर गर्ने बानी पनि ।
थाइल्याण्ड र भारतमा भएका वास्तविक घटनालाई हामीले भूमिका निर्वाह गरी बुझ्ने प्रयास ग¥यौँ । कोही ती वास्तविक घटनाका मूर्त अमूर्त पात्र बने र कुनै शब्दको प्रयोग नगरी प्रस्तुति दिए, कोही घेराबाहिर बसेर उनीहरुको प्रयासलाई नियालेर हे¥यौँ । खासमा, दश जनाको घेराभित्र बसेर दश जना पात्रले सिंगै समाजको वास्तविकता कति सजिलै छर्लगं पारिदियो । परिवर्तनकै लागि काम गर्न खोजे पनि एकले अर्काको कुरालाई बुझ्न नखोज्दा वा नसक्दा एकै दिशामा लम्किएका हामी कसरी तितरवितर हुँदा रहेछौँ भनेर यो गतिविधिले हाम्रो भोगाइ हाम्रोसामु छर्लगं पारिदियो । के बेल्जियम, के भारत, के पाकिस्तान, के नेपाल, हामी जहाँ जुन भूमिबाट आएका भएपनि यो गतिविधिपछि सब चकित बन्यौँ, भावुक भयौँ । त्यो सन्नाटामा यस्तो लाग्यो सबको मन ढुंगाले थिचे जति गहुँ्रगो भयो । कसैको आँसु थामिएन, आँखाबाट बाहिरै झरे । कोही लामो सुस्केरा तानेर आपूmलाई सम्हाल्यौँ । हामी सबैको परिस्थिति त एउटै रहेछ । अरुको कुरा सुन्न नखोज्दा र होलिस्टिक अप्रोच राख्न नसक्दा हामी आफ्नै र अरुको प्रयासबाट कसरी निराश हुँदा रहेछौँ, हार खाँदा रहेछौँ आँखै अगाडि समाज देख्यौँ ।
जीवनमा हामी कतिजना सपना देख्न डरायौँ, देख्नेले हबिगतमा ढाल्न डरायौँ । सपना देख्न डराउनु हुन्न रहेछ र आपूmले आफ्नो र आफ्नाका लागि देखेको सपनालाई वास्तविकतामा ढाल्नका लागि गर्नुपर्ने योजना, कार्य र कार्य गरिसकेपछिको उपलब्धि मनाउन पनि यही एक हप्ताको कार्यशालामा सिक्यौँ ।
जबसम्म हामी आफ्नै शरीरलाई नै चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी आपूmमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ । जबसम्म हामी आपूmलाई नै आदर गर्दैनौँ तबसम्म अरुलाई आपूmजस्तो देख्दैनौँ र आदर गर्न पनि जान्दैनौँ । समाज यस्तै म र अरु बनेर त बन्ने भो । अनि म र अरुलाई नचिनेसम्म समाज परिवर्तन कसरी होस् त ? अरुको कुरा बुझ्न प्रयास नगर्दासम्म हामी सामाजिक समस्या हलका लागि तयार हुन सक्दैनौँ । गोपाल दाइ भन्नुहुन्छ, “संसार परिवर्तन गर्ने अभिभारा तिम्रो होइन । तिमी मात्र आपूmलाई चिन, चेतनशील भएर बाँच । तिम्रो जिम्मेवारी यति नै भो ।”